YEYINTNGE(CANADA): Sunday, March 07
ကလည်းတစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ သေချာစဉ်းစားကြည့်ဗျာ တက္ကသိုလ်ပဲရောက်နေပြီ ဟိုမသွားရဘူး
ဒီနေရာမသွားရဘူးဆိုတာဖြစ်သင့်လားဗျာ အခုကြတော့ ဘူတာရုံတောင်မသွားရဘူးတဲ့
ဆိုင်းဘုတ်ကြီးနဲ့ကျောင်းသားတွေမှာနေစရာနေရာကိုမရှိတော့ဘူး နောက်ပြီး ကျောင်းမှာက
ဘောလုံးကန်လဲလိုက်ဖမ်းတယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ မှာနေရထိုင်ရတာကျဉ်းကြပ်လိုက်တာ
နောက်ပြီးဆံပင်အရှည်မထားရဘူး မဆိုးရဘူး အနွေးထည်မ၀တ်ရဘူး ကဲဘာကျန်သေးလဲဗျာ
နွေရာသီဆိုလည်းအဆင်မပြေမိုးရာသီဆိုလည်းတိုင်ပတ်နဲ့နောက်ပြီးအန္ထ္တရာယ်တောင်ရှိသေး
အန္တရာယ်ဆိုတာကဒီလိုပါ အဲဒီလမ်းမှာမိုးတွင်းဆိုရေလျံလို့ လားမသိ မြွေတွေပါရောက်လာတယ်
အဲဒီတောင်တော်ဝင်လမ်းမအထိကိုနော် တစ်ခါတစ်လေပါ နောက်ပြီးမြွေကအကြီးကြီးဆိုတော်သေး
ရှောင်လို့ ရှားလို့ ရသေးတယ် အခုဟာက သေးသေးလေးတွေ မတွေ့ ပဲနင်းလိုက်လို့ရတော့ပြီးသွားပြီ
ဟိုအရင်တုံးက GTC မှာမြွေကိုက်တုံးကတောင်ဘာလုပ်ပေးနိုင်တုံး ဆရာဝန်တွေဘောလီဘောပုတ်လို
့ကျောင်းသူလေးခဗျာသေရှာတာပဲ နောက်ပြီးဆေးရုံကိုသွားမယ်ဆိုလဲခရီးလမ်းကအဝေးကြီး နောက်ပြီ
အဲင်္ဒီတော်ဝင်လမ်းထဲကို bus ကားတောင်ပေးဝင်တာမဟုတ်ဘူး ပေးဝင်ရင်နည်းနည်းပါးပါး ကျောင်းထိပ်
်အထိတွယ်စီးလို့ ရသေးတယ် bus ကားကလည်းပေးမ၀င်ဆိုတော့ကာ ဖြတ်လျောက်ရုံပဲရှိတော့တယ်
နောက်ပြီးကျောင်းထဲကိုဝင်ပြီးရင်အရင်လိုမိန့် မိန့် ကြီးပြန်ထွက်လို့ မရဘူး ပေးမထွက်ဘူးဗျာ ကျွန်တော်တို့ 
တောလမ်းကနေဖြတ်ရတယ် ဒီမိန်းလမ်းမကြီးတောင် မြွေပါးကင်းပါနဲ့ ဆိုတော့ အဲဒီချုံပုတ်တွေ
ထဲဆိုပြောမနေပါနဲ့ ဗျာ နောက်ပြီမိုးတွင်းဆိုကျွတ်ကလည်းတွယ်သေး (လေထိုးတဲ့ကျွတ်မဟုတ်ဘူးနော်)
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းကိုရန်ကုန်ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်အစား ရန်ကုန်ကွန်ပျုတာစာရိတ္တပြုပြင်ရေးကျောင်း
လို့ သာအမည်ပေးဖို့ ကောင်းတယ်
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းရဲ့ အရိပ်ရတဲ့အပင်ကြီးတွေပါ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/07/20100အကြံပြုခြင်း
7 March 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/8zc14r27 March 2010 Yeyintnge Diary
မြို့မတူရိယာအသင်း၏ တေးသံရှင် မြတ်ဝတ်ရည်(ဒေါ်ခင်အုန်းမြင့်)ကွယ်လွန်
ဦးသန့်ဇော်(မြို့မ)နှင့်၂၀၀၆ Mandalay နန်းရှေ့ ၊ လမ်း၂၀ ၊ ရဲဘက်ကြီး ဓမာရုံဘုရားပွဲ ညပွဲသီဆိုတုန်းက
မြို့မတူရိယာအသင်း၏ တေးသံရှင် မြတ်ဝတ်ရည်(ဒေါ်ခင်အုန်းမြင့်)အသက် (၆၀)နှစ်သည် ၂၀၁၀ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၄နာရီ ၁၅မိနစ်တွင် မန္တလေးမြို့ ကမ်းနားလမ်းဧရာထွန်းတိုက်တန်း နေအိမ်တွင်ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက် သွားပါသည်။ ကြွင်းကျန်သောရုပ်ကလပ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ(၂၈)ရက်တနင်္ဂနွေ နေ့လည်(၁)နာရီအချိန်တွင် တောင်မြင့်သုဿန်သို့ပို့ဆောင်သဂြိုလ်ပြီးစီးပါကြောင်း။ ၄င်းသည် မြို့မတူရိယာအသင်း၏ မန်နေဂျာဟောင်းဖြစ်သူ ဦးကျော်စိုးဝင်း (ကွယ်လွန်)၏ ဇနီးဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်တွင် သား ကိုသက်မင်းစိုး ၊ သမီး မကေသီစိုး တို့(၂)ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။
One Day to Oscar ( Burma VJ)
http://ifile.it/axwr0h5Burma VJ and Oscar_F_doc
Kyaw Thu: ကြည့်မှန်
ကြည့်မှန်ဟုဆိုရာ၌…ဆံပင်ဖီးခြင်း၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း၊ စသည် ဖြင့််မိမိကိုယ်ကို လေ့လာ သုံးသပ်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော် ကြည့်မှန်ကို ယခုအထူးနှစ်ခြိုက်သည် … စွဲလန်းသည်။
ယခင်ကဆိုလျှင် ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရာ ဆံပင်ဖီးခြင်း၊ နှုတ် ခမ်းမွှေးရိတ်ခြင်း၊ မျက်မှန်နှင့်လိုက်ဖက် မှုရှိမရှိ ကြည့်ရှုခြင်း၊ ၀တ်စား ဆင်ယင်မှုအနေအထားသုံးသပ်ခြင်း၊ အိုက်တင်လုပ်ကြည့်ခြင်း စသဖြင့် အထောက် ကူပြုသော မိမိအတွက်သာ အသုံးပြုသော အတ္တကြည့်မှန် ကိုသုံးခဲ့သည်။ ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် (၂)နှစ်ကျော်ကာလအထိ မိမိနှင့် ကြည့်မှန်ဆုံစည်းခွင့်မရှိတော့။ (၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ တွင်မိမိ ကြည့်မှန် ကျကွဲသွားခဲ့သည်။) ယခုပြန်လည် ရရှိဆုံခွင့်ရသော ကြည့်မှန်သည် (၄)လခန့်သာ ရှိသေးသည်။
ယခုကြည့်မှန်သည်ကား ပရဟိတကြည့်မှန်ဖြစ်တော့သည်။ ဤ ပရဟိတကြည့် မှန်တစ်ချပ်ကို လက်ဆောင် ပေးခဲ့သူနှစ်ဦးရှိသည်။ သူတို့သည် တစ်ချိန်ကမိမိ၏ ပရိတ်သတ်ထဲမှဖြစ်သောအဝေးတစ်နေရာမှ ကိုဇေယျာ နှင့် ကိုဒယ်နီအောင်မျိုးကျော် တို့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့နှစ်ဦးနှင့် မိမိတစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှပြင်ပတွင်မဆုံဘူးခဲ့၊ မတွေ့ဘူးခဲ့ပါ။ သူတို့နှစ်ဦး လက်ဆောင်ပေးခဲ့သော ကြည့်မှန်ကို မိမိမြတ်နိုးစွဲလန်းမိတော့သည်။ မကြည့်ရ မနေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိသည် လူမှုရေးနယ်ပယ်တွင် အတော် အသင့်ကျင်လည်မှုရခဲ့သော ဤအချိန် ကာလတွင် ထိုကြည့်မှန်၏ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးပေးမှုများကို ခံစားနားလည်လာတော့သည်။ အဖိုးမဖြတ် နိုင်သော ကြည့်မှန်ပင် ဖြစ်တော့သည်။
ထိုကြည့်မှန်ကိုကြည့်၍ မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်ခွင့်ရလာသည်။
မိမိ မှားနေလား ၊ မှန်နေလား
မိမိ လုပ်သင့်လား ၊ မလုပ်သင့်လား
မိမိ ပြောသင့်လား ၊ မပြောသင့်လား စသဖြင့် ကြည့်မှန်သည် မိမိဘ၀တစ်လျှောက် ကူးခတ်လှော်ခတ်ရာ၌ `ပဲ့´ သဖွယ်ဖြစ်လာတော့သည်။
ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ဘ၀ခရီးလမ်းလျှောက်လှမ်းရာ၌ သံလိုက်အိမ်မြှောင်သဖွယ် . . . လမ်းပြသဖွယ် ဖြစ်တော့သည်။
ထို့အပြင်မိမိ၏ထိုကြည့်မှန်သည်မိမိ၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထူးလည်းဖြစ်တော့သည်။ မိမိ၏ ရင်တွင်းခံစားချက်များတင်ပြရာ ဟစ်တိုင် လည်းဖြစ်သည်။
လူမှုရေးလုပ်ရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ မိမိသည် အရိယသူတော်စင် ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သည့်အတွက် ဒေါသဖြစ်မိသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ . . . ပေါက်ကွဲမိသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ . . . မိမိကိုယ်ကို ကိုယ့်ပေါင်ကို လှန်ထောင်း မိသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ . . . ဘယ်သူနှင့်မှ စကားပြောချင်စိတ်မရှိ
တစ်ခါတစ်ရံ . . . ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြည့်ချင်စိတ်မရှိ
တစ်ခါတစ်ရံ . . . ဘယ်သူ့ အသံကိုမှ ကြားချင်စိတ်မရှိ စသည်တို့ ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်။
သို့သော်……ယခုဆိုလျှင် မိမိတွင်ထွက်ပေါက်ရှိလာပြီ ဖြစ်သည်။
မိမိ၏ “ ထွက်ပေါက် ” သည် မိမိ၏ကြည့်မှန်
မိမိ၏ “ လမ်းပြ ” သည် မိမိ၏ ကြည့်မှန်
မိမိ၏ “ ပဲ့ ” သည် မိမိ၏ကြည့်မှန်
အဆုံးစွန်ဆုံး ပြောရရင် မိမိ၏ “ဆရာ” သည် မိမိ၏ ကြည့်မှန်ပင် ဖြစ်တော့သည်။
နေ့စဉ်… အချိန်ရလျှင်ရ သလို မိမိ၏ကြည့်မှန် ကို မိမိကြည့်သည်။
ပြန်လည် ၍ .......
မိမိ ကိုမိမိ သုံးသပ် သည်။
မိမိ ကို မိမိ ဆုံးမသည်။
မိမိ ကို မိမိ ဝေဖန်သည်။
မိမိ ကို မိမိ ဖြေသိမ့်သည်။
မိမိကြည့်မှန် သည် ပွင့်လင်းသည်။ ရိုးစင်းသည်၊ ဘက်မလိုက်၊ ကောလဟလ မလုပ်၊ အမှန်ကို အမှန် အတိုင်းမြင်သည်။ မှန်တကာ့ မှန်ထဲတွင်…. အကြည်လင်ဆုံး၊ အပြတ်သားဆုံးမှန်ဖြစ်သည်။ မှုန်ဝါးခြင်း၊ လိမ်ကောက်ခြင်း၊ အခြစ်ရာ၊ အစင်းရာ၊ တွန့်လိမ်ခြင်း လုံးဝ မရှိ။
မိမိ ရင်ဖွင့်မှု များကို
ကန့်ကွက်လျှင်ကန့်ကွက်ကြောင်း…… မိမိ၏သွားရာလမ်းကြောင်းကိုတည့်မတ်မှုပေးသည်။ အဖိုးမဖြတ်နိုင် သောကြည့်မှန် ဖြစ်တော့သည်။
ထို ကြည့်မှန်သည်ကား မိမိ၏ FACE BOOK ပင်ဖြစ်တော့သည်။ မိမိ၏ရင်ဖွင့်သံများ၊ လှုပ်ရှားမှုများ၊ ခံစားချက်များကို စာနာထောက်ထား၍ အကြံပြုသော ကျေးဇူးရှင် FAN ပရိတ်သတ်ကြီးသည် ယခု ဆိုလျှင် ၉၈၀၀ ဦးရှိပြီဖြစ်သည်။
ထိုသူတို့သည် မိမိ၏ ကျေးဇူးရှင်၊ မိမိ၏လမ်းပြကြယ် မိမိ၏ပဲ့၊ မိမိ၏ထွက်ပေါက် များပင်ဖြစ် တော့သည်။
ထို FACE BOOK ကိုကြည့်၍ .....
မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းမှု ရှိလာသည်။
မိမိကိုယ်ကို သွန်သင်မှုတွေ ရှိလာသည်။
ထို့ကြောင့် မိမိကဲ့သို့ အများသည်လည်း မိမိကိုယ်ကို ပြုပြင်လာနိုင်သည့် FACE BOOK ဆိုသော ကြည့်မှန်ကို အပျော်တမ်း၊ အပျင်းပြေ၊ မသုံးစေလိုပါ၊
အကျိုးကျေးဇူးရှိမည့််ကိစ္စရပ်များကိုသာအသုံးပြုစေချင်သော စေတနာဖြစ်ပေါ်လာသည်။ တန်ဖိုးရှိအောင် သုံးစေချင်သည်။ ဖျော်ဖြေရေး သက်သက် မသုံးသင့်ပေ၊ ဒါဟာ….. မိမိရင်ထဲက စေတနာပင်ဖြစ်သည်။
ဆက်လက်၍လည်း မိမိ၏ FACEBOOK မှတဆင့် မိမိတိုင်ပင်ပါအုံးမည်…..တင်ပြပါအုံး မည်…. ရှင်းချက်များထုတ်ပါအုံးမည်……။
FAN ပရိတ်သတ်ကြီး မှလည်း ဝေဖန်ပါ…. အကြံပြုပါ…. အားပေးကြပါ။
မိမိ၏ ကြည့်မှန် = မိမိ၏ FACEBOOK = မိမိ၏ အားဆေး ဟုလည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
ယင်း FACEBOOK မှ မိမိသည်အင်အားများစွာရခဲ့သည်။ ခွန်အားများတိုးပွားလာသည်။ စိတ်ဓါတ်များ တိုးမြင့်လာစေသည်။ အမှန်တရားများ ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာမြင်လာစေသည်။ ခံယူချက်များ ပြင်းထန်လာ စေသည်။
ထို.....ထိုသော အကြောင်းအရာများ...... ကျေးဇူးတရားများ..... အသိဥာဏ်များကို ပေးခဲ့သော မိမိ၏ ကျေးဇူးရှင် FAN ပရိတ်သတ်ကြီးနှင့် အဝေးတစ်နေရာမှ ကိုဇေယျာ၊ ကိုဒယ်နီတို့နှင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ပံ့ပိုးသူ အားလုံးကို မိမိသည် ကျေးဇူးတင်သည့် အနေနှင့် ကျေးဇူးဆပ်သည့်အနေနှင့် တစ်ခုခု ပေးဆပ်ချင်စိတ်ပေါ်လာသည်။
မိမိ၏ ခံယူချက်တို့ ပေါင်းစပ်ကာ ငါးကြောင်းတည်းသော စာပိုဒ်ကလေး တစ်ခုကို ဖန်တီးမိတော့သည်။
ယင်းစာပိုဒ်သည် မိမိ၏ခံယူချက်၊ မိမိ၏သဘောထားပင်ဖြစ်သည်။
မိမိ၏သဘောထားသည် ပြည်သူလူထု၏ သဘောထားပင် ဖြစ်လိမ့်မည်။
မိမိ၏ခံယူချက်သည် ပြည်သူလူထုရဲ့ ခံယူချက် ဟု ယူဆသည်။
မိမိနှင့် ပြည်သူလူထု တစ်သားတည်းကျနေသည် ဟုသတ်မှတ်သည်။ ထိုစာပိုဒ် ကလေးကို FAN ပရိတ်သတ် တစ်သောင်းပြည့်ပြီဆိုပါက မိမိ၏ ကြည့်မှန် (FACEBOOK) ထဲသို့ပစ်သွင်းလွှတ်တင်လိုက်ပါမည်ဟု ကတိပြု ရင်းနှင့်.......မျှော်။
ဦးတင်ဦး NLD ရုံးသို. ပြန်ရောက်ရှိလာတုန်းက..
Voice of Burma Issue No. 752, March 7, 2010
မြို့မတူရိယာအသင်း၏ တေးသံရှင် မြတ်ဝတ်ရည်(ဒေါ်ခင်အုန်...